Eny amin’ny boriborintany: filaharambe ny fanamboarana kara-panondro | NewsMada
Eny amin’ny boriborintany: filaharambe ny fanamboarana kara-panondro
Efa voatsinjara eny amin’ny boriborintany ny taratasy manokana fanaovana kara-panondro. Filaharambe, araka izany, ny tazana amin’ireny toerana ireny nanomboka tamin’ity herinandro ity. Samy manana ny fotoany handraisana ny antontan-taratasy ny boriborintany, arakaraka ny fandaminana asa ao aminy.
Ho an’ny eny Ivato, isaky ny talata sy ny alakamisy ny fanaovana kara-panondro. Omaly, anjatony ireo olona nitandahatra nanamboatra izany. Narindra ny asa hanafainganana ny fandraisana ireo olom-pirenena ireo.
Efa an’arivony ny fangatahana voaray tao anatin’izay fotoana tsy nisian’ny taratasy efa am-bolana maro izay. Ao ireo kara-panondro very, ny sasany efa lany andro (miohatra ny 20 taona).
Ny lehiben’ny distrika sy ny prefet irery kosa no manana fahefana hanao sonia ao amin’izany kara-panondrom-pirenena izany hampanan-kery azy. Miandraikitra ny fikirakirana ny antontan-taratasy ihany ny anjaran’ny lehiben’ny boriborintany.
Anisan’ny antontan-taratasy ilaina ny fanamarinam-ponenana, ny sary tapaka efatra ary ny kopia lava. 200 Ar ihany ny vola aloa amin’ny fanamboarana kara-panondro raha ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana.
15 andro eo ho eo ny fahavitan’ny kara-panondrom-pirenena.
Tsiahivina fa 1 tapitrisa ny taratasy fanamboarana kara-panondro naparitaka manerana ny Nosy. Manodidina ny 7 hetsy isan-taona kosa anefa ny filana isan-taona, raha ny fanazavana.
Marihina fa betsaka ny raharaha mikatso rehefa tsy manana kara-panondro ny olom-pirenena iray. Tsy afaka mandray anjara amin’ny fifidianana ihany koa ireo tsy manana izany kara-panondro izany.